MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA AIREDALE TERRIER - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Airedale Terrier
Cooper Terre Airedale markii uu jiray 2 sano
Liistada eeyaha Airedale Terrier Mix
Terire Terrier-ka ayaa ah kan ugu weyn Terrier-ka wuxuuna muuqaal ahaan u taagan yahay afar gees. Qalfoofku wuxuu la egyahay dhererka masaska, oo leh joogsi aad u yar oo ay adag tahay in la arko. Madaxa waa dheer yahay waana fidsan yahay. Sanku waa madowyahay. Ilkaha waa inay ku kulmaan heer, qaniinyo u eg ama maqas. Indhaha yar yar ayaa midabkoodu mugdi yahay. Dhegaha oo qaabeeya V ayaa xoogaa isku laabaya dhinaca madaxa iyo xagga hore. Laabta ayaa qoto dheer. Khadka sare ee dhabarka ayaa siman. Lugaha hore ayaa si qumman u toosan. Dabada ayaa sare loogu dhigay dhabarka. Jaakada laba-geesoodka ah waxay leedahay jaakad dibadda ah oo adag, cufan lehna cufan oo leh jilbis jilicsan. Midabada koofiyada waxaa ka mid ah tan iyo madow iyo tan iyo grizzle. Madaxa iyo dhagaha waa inay ahaadaan kuwa duban, iyadoo dhagaha ay yihiin hooska waxoogaa madow ee harka. Lugaha, bowdyaha, xusullada iyo qaybta hoose ee jidhka iyo xabadka sidoo kale way dhalaalaan, mararka qaarkoodna garabka ayay ku ordaan. Khadadka qaar korkooda waxaa kajira olol yar oo cad. Dhabarka eeyga, dhinacyada iyo qeybaha kore ee jirka waa inuu ahaadaa midab madow ama mugdi madow.
Airedale Terrier badanaa caadi ayey la noqon doontaa carruurta haddii ay hore u soo gaadhaan iyo is dhexgalka bulshada , si kastaba ha noqotee waxay u ciyaaraan si aad u adag kuwa yaryar. Geesinimo iyo ilaalin. Si cadaalad ah ula saaxiib shisheeyaha. Caqli badan, wacan oo daacad ah. Xasaasi ah oo jawaab celin leh, wuxuu noqon karaa adeecid lagu tababaray heer sare. Airedale Terriers waa baashaal jecel oo ciyaar leh markay yihiin eeyo. Airedales way ku farxi doonaan inay kaa farxiyaan haddii aysan jirin wax culeys dheeraad ah ku haya deegaanka (chipmunk, eey kale, cunno). Airedale waa mid aad u daacad ah, laakiin sida ugaarsadaha aadka u jecel waa inaad noqotaa tababare tababbaran si aad uga keento inuu ka soo baxo baqshiishka xitaa steak cayriin! Si dabiici ah ayay u nool yihiin oo waxay noqon karaan kuwo kacsan haddii aysan helin maalin kasta ku filan jimicsi maskaxeed iyo mid jireed . U tababbar eeygan inaadan ku bood bini'aadamka . Airedale Terrier wuxuu ubaahanyahay tababbar adeecid sax ah iyo milkiile garanaya sida loo noqdo ' Eyga Sare 'Airedale Terrier waxaa laga yaabaa inuu haysto caqabado sal u ah xubnaha qoyskiisa ee uu u arko inay adeecaan. Tani waxay u horseedi kartaa rabitaan iyo caasinimo. Ma ahan adag tahay in la tababaro , laakiin kama jawaabaan hababka tababarka adag, ee xad dhaafka ah. Terireylka Airedale waa mid caqli ku filan oo si dhakhso leh u fahmi kara waxa looga baahan yahay, laakiin haddii aad weydiisato inay sameyso wax isku mid ah marar badan way diidi kartaa. Isku day inaad siiso xoogaa noocyo ah tababarkiisa, taasoo jimicsiga ka dhigaysa mid caqabad ku ah. Waxay ubaahan yihiin degganaan, laakiin adag, kalsooni leh ilaaliye joogta ah. Iyada oo gacan-hayaha saxda ah, Airedale Terrier wuxuu ku fiicnaan karaa isboorti eeyo kala duwan oo ay ku jiraan tijaabinta eyga difaaca Noocani guud ahaan wuxuu si wanaagsan ula dhaqmaa bisadaha guryaha iyo xayawaannada kale, laakiin mararka qaarkood waxay isku dayaan inay xukumaan eeyaha kale. Tani waxay kuxirantahay habka aadanaha hareeraha eyga ayaa daaweynaya , tababarkooda iyo eeyga shaqsiga ah.
Dhererka: Ragga 22 - 24 inji (56 - 61 cm) Dumarka 22 - 23 inji (56 - 58 cm)
Miisaanka: Ragga 50 - 65 rodol (23 - 29 kg) Dumarka 40 - 45 rodol (18 - 20 kg)
Nooc aad u adag, inkasta oo qaarkood laga yaabo inay ku dhacaan dhibaatooyinka indhaha, dysplasia sinta iyo infekshinka maqaarka. Haddii Airedale Terrier-gu leeyahay maqaar qalalan, waa in lagu quudiyo saamiga asiidh ee omega-6 / omega-3 ee cuntada.
Terireire-ka Airedale laguma talin karo inuu ku noolaado guri dabaq ah. Iyagu gudaha way firfircoon yihiin waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
Airedales waxaa loo soo saaray shaqo firfircoon, sidaas darteedna waxay u baahan yihiin jimicsi fara badan. Waxay u baahan yihiin in loo qaado socod dheer maalinle ah . Intooda badani waxay jecel yihiin inay kubbad ku ciyaaraan, dabaalan karaan ama ay soo ceshan karaan walxaha markay si buuxda u koraanna waxay si farxad leh ula ordi doonaan baaskiil. Feejignaan la'aan iyo jimicsi la'aan Airedale Terrier wuxuu noqonayaa mid aan xasillooneyn oo caajisiin ah isla markaana sida caadiga ah laftiisu dhibaato galo. Shuruudda jimicsiga ayaa xoogaa hoos ugu dhici karta labada sano ee hore ka dib (sida eeyaha badan) laakiin labada sano ee ugu horreeya ee leh Airedale aad ayey ugu adag yihiin aadanaha. Kadibna waxay bilaabayaan inay is-rogaan.
Celcelis ahaan 9 eeyo
Airedales waxay leeyihiin jaakad adag oo gaaban, timo gaaban. Timaha waa in la guraa qiyaastii laba jeer sanadkii, laakiin eeyaha ay tahay in la muujiyo, ayaa loo baahan yahay qurxin aad u xoog badan. Timo xad-dhaaf ah ka jar cirbadaha cagaha markii loo baahdo. Haddii aad sii haysato jaakadda dharka laga siibay waxay u daadineysaa wax yar oo timo ah, si kastaba ha noqotee haddii aadan dharka ka saarin, waxaad u badan tahay inaad ka heli doonto dhogor dhogor hareerahaaga salka, xitaa iyadoo la xoqayo oo la cadayayo maalin kasta. Xaqiiqdii waxay u baahan yihiin xoogaa qurxin ah. Burrs ayaa ku dheggan jaakadda iyo gadhka. Garka waa in la dhaqo maalin kasta cunnada hadhay darteed. Airedale Terriers waxay u fiicnaan kartaa qaar ka mid ah dadka xasaasiyadda ku dhaca.
Airedales-kii ugu horreeyay wuxuu umuuqday mid gebi ahaanba ka duwan Airedales-ka maanta. Waxay markii hore loo yiqiinnay Waterside iyo Bingley Terriers, waxay ka soo farcameen hadda bakhtiyey nooca Territory-madow iyo tan. Noocii ayaa markii dambe laga gudbay Otterhound si uu uga dhigto dabaal wanaagsan. Waxa kale oo la sheegay inay leedahay Manchester Terrier dhiiggiisa. Waxaa laga soo saaray boqol sano ka hor waddanka York oo laga soo qaatay Terrier-kii hore ee Shaqada. Airedale waxaa badanaa loo yaqaan 'Boqorka Argaggixisada'. Noocani waxaa loo adeegsaday ugaarsade xayawaan ah waxaana loogu magac daray Dooxada Aire ee England, oo si aad ah ay ugu noolaayeen ciyaar yar. Ka sokow doorkiisa ugaarsade yar, Airedale waxaa loo adeegsaday in lagu ugaadhsado ugaad weyn India, Afrika iyo Kanada. Noocyada ayaa sidoo kale loo adeegsaday eey booliis ah iyo ilaaliye xilligii Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Maanta Airedale ayaa ugu horreyntii ah eey wehel ah, laakiin wali waxaa jira khadad shaqeynaya oo halkaas yaal. Qaar ka mid ah hibooyinka Airedale waa ilaalin, ilaalin, ugaarsi, xakameynta jiirka, raadraaca, shaqada militariga, shaqada booliska iyo u hoggaansamida tartanka.
Eeg tusaalooyin badan oo Terire Terrier-ka ah
Airedale Terrier Sawirada 1
Airedale Terrier Sawirada 2
Airedale Terrier Sawirada 3
Airedale Terrier: Sawirro Guryo Goobo La Uruurin Karo
ey ayaa leh lugaha hore ee foorarka
shih schnauzer SUNTZU qas for sale
shih tzu iyo yorkie oo isku dhafan eeyo
waxa ey ey ahaayeen lassie
feeder adhijir isku qas eeyo yar yar oo iib ah
sawirrada shaybaarka madow iyo iskudhafka loo yaqaan 'pitbull mix'